လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Condominium တစ်ခု တွင် Standard ရှိရှိ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လိုပါသလား…??
>>> အလွန်ရှားပါးလှသော ရာသက်ပန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သောမြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ Condo ကို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား…??
>>> အရည်အသွေး အထူးကောင်းမွန်ပြီး Hotel Zone များတည်ရှိရာနေရာ… သားစဉ်မြေးဆက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် ရာသက်ပန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသောမြေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့
Sky Suite Residence Condo ကတော့ လူကြီးမင်း တို့ ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စွမ်းပေးဖို့ စောင့်ကြိုနေပါပြီ……
Location…ကတော့ ရန်ရှင်းလမ်းမကြီး Sedona Hotel ဘေးမှာ တည်ရှိပြီး သေသပ်လှပသော Condo တစ်ခု…
Quality အထူးပြည့်မီသော Furniture များကို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပေးထားပြီး Fully Furnished, Fully Decorated ဖြစ်သောကြောင့် အသင့်နေထိုင်ရုံပါပဲ…
75% ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ကြန့်ကြာနေမှာကို စိတ်ပူနေစရာမလိုတော့ပါဘူး…
Condo ရဲ့ အရည်အသွေးကို သင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
ပြီးရင်တော့ တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်
တစ်ခန်းဝယ်ရုံနဲ့ Car Parking ကိုတစ်စီးစာပေးထားတာဖြစ်လို့ အရမ်းက်ို တန်နေပါပြီ…မိမိအခန်းကနေရန်ကုန်မြို့ ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကိုဖူးမျှော်နိုင်ပြီး အင်းယားကန် နဲ့Condo အတွင်းရေကူးကန်ဗျူးများကိုပါတွေ့ မြင့်နိုင်တာကြောင့်အရမ်းကောင်းတယ်နော် . . .
Residence ရဲ့3လွှာမှာ Facilities Area ရှိတာကြောင့် Luxury Feeling ကိုအေးချမ်းစွာ အပြည့်အဝခံစားနိုင်မှာပါ…
လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ Payment တိုင်းမှာ Discount Plan လည်းရှိနေပါသေးတယ်
Promotion Discount အစီအစဉ်လေးတွေလည်းရှိလို့အဆင်ပြေတယ်နော်
ဒီလို အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ Sky Suite Residence ကို လက်မလွတ်ဘဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရယူလိုက်ပါ……
ပါဝင်သော Facilitates များကတော့
Special Promotion Plan များအားစိတ်ဝင်စားပြီး လာရောက်လေ့လာ ဝယ်ယူလိုပါက
>> Location >> ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ရှင်းလမ်း Sky Suites Showroom
(Viewing Only with Appointment) Pls Call or msg below...